Habeen Kale Mucjiso : Lucas Moura Oo Tottenham Ku Hogaamiyay Finalka Champion-ka,Sedexleey Ayuu Dhaliyay – Wararka Ciyaaraha Maanta
Habeen Kale Mucjiso : Lucas Moura Oo Tottenham Ku Hogaamiyay Finalka Champion-ka,Sedexleey Ayuu Dhaliyay
May 9, 2019 kooxda Bundesliga, Champions League, Premier League, Wararka Maanta 1
Ajax ayaa nasiinada ugu dirtay Tottenham laba gool oo nadiif ah xilli kulankaan ahaa lugta labaad ee wareegga semi finalka Champion-ka .
Tottenham ayaa ciyaarta ku biloowday qaab taxadar leh halka Ajax ay ahaayeen kuwo dar dar leh oo kubad deg degsiimo leh ayay ciyaarayeen .
Tottenham durba biloowgii gool ayaa lagu helay waxaana madaxa ku dhaliyay Matthijs de Ligt daqiiqaddii 5-aad waxaana muuqatay in daafaca Tottenham ay ilaaladdii ka iloowbeen laacibkaas kaasi oo madaxa ku dhaliyay goosha .
Ka dib goolkaas Tottenham waa ku adkeyd in si sax ah ay kubadda horay ugu soo jiidaan iyadoo kullamaa ay kubadda helaan ee ay dhaqaajiyeen waa la soo celinayay .
Ajax waxaa ka muuqatay kalsooni dheeraad ah waxa ayna kubadooda aheyd weerar oo dagaal ayay ugu jireen gool labaad kaasi oo ugu dambeyn yimid daqiiqaddii 35-aad waxaana saxiixay Hakim Ziyech xilli goolkaan isna uu ka muuqday qalad dhanka daafaca ah .
Guud ahaan marka la eego hanaan ciyaareedka labada koox ee qeybtaas hore waxaa cadaadis badneyd Ajax oo waliba goolal kale ku sigeysay Tottenham .
Biloowga qeybta labaad , Tottenham kubad iyaga ayaa ku badnaa waliba baasas wacan ayay dhisayeen xilli kubadana ay ku qajafeynayeen goosha Tootenham .
Ajax waxa ay u muuqdeen kuwo difaac galaya waxa ayna Tottenham dadaalkooda ku keeneen gool uu dhaliyay Lucas Moura daqiiqaddii 55-aad.
Tottenham weerar aan kala joogsi laheyn ayay ciyaarayeen waxaana daqiiqaddii 57-aad kubad gool aheyd ka bad baadiyay goolhayaha Ajax balse isla kubadaas ayay ku keeneen gool waxaana saxiixay mar kale Lucas Moura daqiiqaddii 59-aad.
Ka dib goolkaas Ajax waxa ay bilaabeen in ay soo weerar tagaan waa ayna ku dhiiranayeen in goosha Tottenham soo gaaraan , waxa ayna ciyaarta u muuqatay in labada koox laga filan karo goolal .
Inkastoo Tottenham kubad haysashada ku badneyd ayna gaarayeen mararka qaar heer dhan %57 hadana Ajax kubad waliba oo ay la tagaan goosha Tottenham halis ayay aheyd .
Tottenham cadaadis ayay saareen Ajax dhamaadkii waa ayna mudnaayeen in ay helaan gool-ka seexaad halka kooxda reer Jarmal ku tiirsanaayeen kubadaha rogaal celiska ah. waxa ayna heerka kubad haysashada Tottenham gaartay heer dhan 57%.
Si waliba oo ay ahaato una weerar tageen Tottenham waa laga filan karay gool sedexaad kaasi oo ugu dambeyn yimid waqtigii dheeriga ciyaarta waxaana saxixiay Lucas Moura oo sedexeystay . waxa ayan Tottenham sidaas ugu gudbeen finalka Champiopn-ka oo ay bisha June wada ciyaarayaan Liverpool. guud ahaan natiijada waa 3/3 balse Tottenham ayaa soo baxday maadaama sedex gool ku dhaliyeen garoonka Ajax
abdiqaadir c cc says:
fariin idinku socota kooxda.com bogan shaqsiga ama shaqsiyada qorta waxan idinka codsan oo idiin sheegin inad hal eray iska daysan wa iga dardaaran wana erayga mucjiso erayga mucjiso muxu yahay wa wax qariib ah oo ilahay agtiisa ka wayn ama itixaan ah ama salid ah belaayo ama wax khayr ah oo an lag arag aduunka oo mar uun la arko ama shaqsi halagu salido ama qom halagu haligo ama wax khayr oo an aduunka lagu arag ha noqdo marka erayga mucjiso wa wax ale agtiisa ka wayn ama kamida awooda uqaska ah uu bini adankiisa tuso marka walayaal waxan idinka codsan ciyaaro bakhtiya nasiib ah oo gaalo ababulatay ma aha inad ku sheegtan mucjiso wa dambi wana jahil nimo bal dib iskugu noqda oo ufirsada erayga mucjiso ibtad isleedihiin wax qurxiya yeydan dabi gelin subxanallh